MTSS - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Qaybaha aasaasiga ah ee MTSS
Qiimeyn : Qalab badan, oo isugu jira qaab dhismeed iyo soo koobid, ayaa loo isticmaalay in lagu soo ururiyo macluumaadka ku saabsan barashada ardayga.
Tilmaamaha Ku-saleysan Caddaynta : Waxbarid tayo leh oo ay taageerto cilmi-baaris cilmiyeed oo dhiirrigelisa guusha dhammaan DHAMMAAN ardayda.
Farogelinta : Istaraatiijiyad salka ku haysa caddayn oo loo adeegsado in lagu barto xirfad, lagu dhiso xirfad ama lagu dhiirrigeliyo ku adeegsiga xirfad jirta xaaladaha cusub ama goobaha. Xogta ayaa la uruuriyaa si loola socdo horumarka.
Sii-wadida Sii-wadashada ee Taageerada : MTSS waxaa lagu gartaa is-daba-joogga tacliinta isku-dhafan iyo is-taageeridda 'SEL' oo ka tarjumaya baahida loo qabo ardayda inay helaan dareeraha helitaanka waxbarista iyo taageerooyinka xoogga kala duwan.
Fidelnimada Hirgelinta : Hirgelinta ficillada ku saleysan caddaynta oo ay ku jiraan barashada aasaasiga ah, faragelinta iyo ku kobcinta daacadnimada.
Samaynta Go'aan-Ku-saleysan Xog : Daneeyayaashu waxay u adeegsadaan xogta laga helay nidaamka MTSS si ay u horumariyaan tacliinta iyo KEL si ay u gaaraan go'aannada ku saabsan gaaritaanka ardayda.
Maxay yihiin cunsurrada muhiimka ah ee MTSS?
Waxyaabaha muhiimka ah ee MTSS waa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida si guul leh loogu hirgeliyo qaybaha muhiimka ah ee MTSS. Waxyaabaha muhiimka ah waa:
Hogaan wax ku ool ah oo bixiya isku xirnaanta qaab dhismeedka MTSS, Qorshaha Horumarinta Dugsiga (SIP) iyo Himilada Degmada ee Midaysan (UDV)
Isku waafajinta siyaasadaha iyo nidaamka guud ahaan fasalka, .grade / waaxaha, dhismaha, degmada iyo heerarka gobolka
Isticmaalka waxtarka leh ee geeddi-socodka xallinta dhibaatooyinka si loo taageero qorshaynta, hirgelinta iyo qiimeynta waxtarka adeegyada
Wada shaqeyn wanaagsan oo socota oo ka dhexeysa dhammaan daneeyayaasha si loo hubiyo natiijooyinka ardayda ee guuleysta
Nidaamyo xog-dhameystiran, hufan oo ku habboon-u-adeegsi oo lagu taageerayo go'aan-qaadashada heerarka oo dhan
Helitaanka tabobarrada taageeridda si loo caawiyo dadaallada xallinta dhibaatooyinka kooxaha dugsiga
Horumarka xirfadeed ee kusocda xogta kusocota ee kusocota yoolalka ardayda iyo baahiyaha shaqaalaha
La wadaagga natiijooyinka guusha leh iyo fursadaha koritaanka dhammaan daneeyayaasha
Buugga 'MTSS Handbook' ayaa goor dhow la soo dhejin doonaa!